Maitiro ekuisa TensorFlow Machine Kudzidza Sisitimu pane Ubuntu 20.04 | Linux Vakapindwa muropa
TensorFlow Iri raibhurari raungangodaro uchitoziva. Iyo inoshandiswa kumuchina kudzidza uye yakavhurika sosi. Izvo zvakanyorwa uchishandisa Python uye yakagadzirwa neGoogle. Parizvino, makambani mazhinji nemasangano ari kushandisa chirongwa ichi, senge Airbus, Lenovo, Intel, Twitter, PayPal, kana Google pachayo, pakati pezvimwe zvakawanda.
Zvinogona kuva instalar uchishandisa Anaconda, sechigadziko chedocker, kana pane iyo Python desktop desktop. Nenharaunda chaiyo, vashandisi vanobvumidzwa kuve nenzvimbo dzakasiyana dzakasiyana nesystem imwechete uye nekuisa yakatarwa moduru maererano nezvinodiwa zveprojekiti yako uye pasina kukanganisa zvimwe zvirongwa.
Pano iwe unogona kudzidza maitiro ekuisa iyo TensorFlow raibhurari kutanga ako mapurojekiti e machine learning. Uye iwe uchazviita pane yako Ubuntu 20.04 distro uchishandisa Python chaiyo nharaunda.
ari matanho ekutevera Iwe uri wekutanga kumisikidza Python 3.8 kana iwe usinayo uye kugadzirisa iyo chaiyo nharaunda.
Ipapo iwe unofanirwa gadza TensorFlow, nekuti aya matanho ndeaya:
Kana yagadzirira, ikozvino unogona kutanga kushanda naye… Ndinovimba iyi dzidziso yakubatsira uye iwe unogona kutanga kudzidza nekugadzira zvinhu zvinonakidza zvakadaro uchishandisa maturusi aya ekumisikidza huwandu hwekushandisa.
Kana iwe usingazive Tensorflow uye uchida kudzidza, iwe unofanirwa kuziva kuti kune kuwanda kwezvinhu zvekudzidza, senge makosi, mabhuku, nezvimwe. Iwe une yakanaka sununguka pano iwe pachako, kuti ugone kudzidza zvakavanzika zvacho uye wotanga kugadzira zvinhu zvinobatsira zvichibva pakudzidza kwakadzika.
Uye ini ndinopedzisira ndichiwedzera kuti pamusoro pekushandira Ubuntu, iwe unogona zvakare kuiisa nenzira yakafanana mu mamwe ma distros zvichibva pairi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuisa TensorFlow Machine Kudzidza Sisitimu pane Ubuntu 20.04
Debian inoronga chiitiko chepamhepo-chine chekuita nemitambo